Chengetedzo kuti nomoto kubva Stainless simbi akapfeka simbi - China Foshan Hermes Steel
Chengetedzo kubva Welding of Stainless simbi akapfeka simbi
Isimbi isina simbi yakapfeka simbi simbi inoumbwa nemhando mbiri dzakasiyana dzesimbi mahwendefa, kusanganisira kuputira (simbi isina simbi) uye hwaro hwedenga (kabhoni simbi, yakaderera chiwanikwa simbi). Sezvo paine maviri epasi zvigadzirwa zvepaarlite simbi uye austenitic simbi kana uchicheka simbi yakasungwa yakapfeka simbi, iyo yekumisikidza yakapfeka simbi ndiro ndeyomoto wekusanganisa yeakasiyana simbi. Naizvozvo, zvinoenderana maitiro matanho anofanirwa kutorwa panguva yekumonera maitiro kuti asangosangana chete nesimba rinodiwa nesimbi yekumisikidza yeiyo base layer, asi zvakare ive nechokwadi chekudzivirira kweye corrosion yeiyo kupfeka. Kana oparesheni yacho isiri iyo, ichave nemhedzisiro. Iyo chaiyo yekuzvidzivirira panguva yekumonera ndeinotevera:
1. Kune isina chinhu inoumbwa nesimbi simbi yekumonera zvikamu, zvinodikanwa kuti usangane nesimba rinodikanwa nesimbi yekutenderera yeiyo hwaro hweta uye kuve nechokwadi chekumisa ngura kweiyo kupfeka. Naizvozvo, iyo yekutenderera yesimbi isina chinhu yakapfeka simbi ine hushe hwayo. Iyo yepasi dura uye yepasi dura inofanira kusunganidzwa neakabhoni simbi uye yakaderera alloy simbi maelekodhi anoenderana neiyo base layer zvinhu, senge E4303, E4315, E5003, E5015, nezvimwewo .; yeiyo yekufukidza dura, kuwedzera kabhoni kunofanira kudzivirirwa. Nekuti iyo kabhoni inowedzera yeiyo weld ichaderedza zvakanyanya kupisa kweiyo ngura yezvinhu zvisina simbi zvinoumba simbi. Naizvozvo, iyo yekutenderera kweye kuputira uye yekunamatira inofanirwa kusarudza iyo electrode inoenderana neyekuvhara zvinhu, senge A132 / A137, nezvimwe; Welding yeiyo shanduko yakaturikidzana panosangana denderedzwa repasi uye iyo yekumonera inofanira kudzikisira kuwedzeredza mhedzisiro yekabhoni simbi pane isina simbi alloy kuumbwa uye inowedzeredza iyo yekumonera maitiro Kupisa kurasikirwa kweiyo alloy kuumbwa. Cr25Ni13 kana Cr23Ni12Mo2 mhando ma electrode ane yakakwira chromium uye nickel zvemukati zvinogona kushandiswa, senge A302 / A307.
2. Nezve weldments yesimbi yakasungirirwa simbi yeplata, mupendero usiri iwo haufanire kupfuudza iyo inobvumidzwa kukosha (1mm). Simbi dzakapfekerwa simbi mahwendefa anowanzo kuve neyakavakirwa dura uye yekufukidza dura ine ukobvu hwe1.5 kusvika 6.0 mm chete. Tichifunga kuti pamusoro pekugutsa michina yezvinhu zvacho, iyo simbi isina simbi yezvinhu simbi zvakare inofanirwa kuverengera kuramba kweyekuvhara kwekupfeka kwakabatana neyakaora svikiro. Naizvozvo, kana uchiunganidza iyo weldment, inodikanwa kuenzanisa iyo yekufukidza dura sehwaro, uye kumucheto kweye cladding layer haifanire kudarika 1mm. Izvi zvinonyanya kukosha kana uchibatanidza simbi dzakapfeka simbi mahwendefa ane akasiyana makobvu. Kana kusarongeka pakati pezvikamu zvekuvhara zvakakurisa, iyo simbi iri pamudzi wepasi pevhu inogona kusungunusa imwe yesimbi isingaite, iyo inowedzera simbi yezvinhu zvechimbi pamudzi weiyo hwaro, zvichiita kuti weld ive yakaoma uye yakapwanyika, uye panguva imwechete, iyo simbi isina simbi pajoinhijo yakabatanidzwa. Ukobvu huchaderedza hupenyu hwebasa, hunokanganisa iyo mhando yemhando yeiyo cladding layer, uye zvinonetsa kuona kurwisa kwekuora kweiyo yakarongedzwa mamiriro.
3, zvinorambidzwa zvachose kusanganisa shanduko yekuchinjisa kana kuwaya yekumonera simbi isina chinhu nemidziyo yekumonera yeiyo yekucheresa hwaro: panguva imwe chete, kudzivirira iyo yekumonera yekunamatira zvinhu kubva pakushandiswa zvisirizvo pane iyo yekumonera musono weiyo yekumonera shanduko wedenga uye iyo chigadziko.
4. Kana hwaro hwesimbi hwakatambanudza zvinhu zvinoshandiswa kukochekera padivi pekuputira, mhinduro yechoko inofanira kuvharwa mukati me150mm pamativi ese egoroji kuti ichengetedze kudzivirira denderedzwa repasi nugget zvinhu kubva kunamira kune isina simbi pamusoro. panguva yekugadzirisa. Iyo oxide firimu pamusoro pepamusoro inokanganisa ngura kuramba kwesimbi yakasanganiswa yesimbi. Kuparadzira zvidimbu zvinonamatira zvinofanirwa kucheneswa nemazvo.
5. Mudzi wesimbi weiyo base layer inotora electrode arc Welding. Nekuderedza kudzikiswa kwezvinhu zvechisimba pasi pemamiriro ekuona iko kupinda, iyo fusion reshiyo inofanirwa kudzikiswa. Panguva ino, diki yekutungidza yazvino uye inokurumidza kuwelding kumhanya inogona kushandiswa. Rega lateral swing. Welding yeye cladding inofanirwa kusarudza diki simbi yekupisa yekuisa, kuitira kuti nguva yekugara mune ine ngozi tembiricha (450 ~ 850 ℃) nzvimbo ipfupi sezvinobvira. Mushure mekudonha, mvura inotonhorera inogona kushandiswa pakutonhora nekukurumidza.
6, kana iyo isina shangu yakapfeka simbi ikawanikwa iine hunyengeri hwekudhirowa isati yatungidzwa, kutenderera hakubvumidzwe. Iyo delamination inofanirwa kubviswa pekutanga, kugadzirisa welding (kureva., Kuwedzeredza kuwelding), uye kumisikidza mushure mekugadziriswa.
7. Maturusi akakosha anofanirwa kushandiswa kuchenesa hwaro hwepasi uye mativi ese ekufukidza. Iyo yepasi dura inofanirwa kushandisa kabhoni simbi waya mabhurashi, uye iyo yekumonera inofanirwa kushandisa isina simbi waya waya mabhurashi.